प्रतिनिधिसभा बैठकः विनियोजन विधेयक पास - Himalayan Kangaroo
प्रतिनिधिसभा बैठकः विनियोजन विधेयक पास
Posted by Himalayan Kangaroo | १५ असार २०७५, शुक्रबार ०९:२६ |
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकले विनियोजन विधेयक २०७५ बहुमतले पारित गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विनियोजन विधेयक २०७५ लाई पारित गरियोस् भनि राखेको प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गरेको हो । यसअघि यस विधेयकमाथि सासंदहरुले राखेको खर्च कटौतिको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो ।
त्यसैगरी शुक्रबारकै बैठकले आर्थिक विधेयक २०७५,राष्ट्रऋण उठाउने विधेयक २०७५ र ऋण तथा जमानत (२२ औ संसोधन) विधेयक २०७५ लाई स्वीकृत गरेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक विधेयक २०७५ लाई विचार गरियोस् भनी गरेको प्रस्ताव वहुमतले स्वीकृत भएको हो । सो विधेयकको दफाबार छलफलका लागि असार १८ गतेको समय तोकिएको छ ।
त्यसैगरी अर्थमन्त्री खतिवडाले राखेको राष्ट्रऋण उठाउने विधेयक २०७५ र ऋण तथा जमानत (२२ औ संसोधन) विधेयक २०७५ लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।
तीन वटै विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुदै सांसद प्रेम सुवालले के का लागि ऋण भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । खानेपानी, भुकम्पछिको पुर्ननिर्माण र स्वास्थ्य बाहेकका क्षेत्रका लागि ऋण लिन नपाईने भन्दै उहाँले ऋण लिनुपर्ने कारण स्पष्ट आउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “नेपाली जनताको प्रत्येकको टाउकोमा २५ हजार ऋण छ । के खाएको छ नेपाली जनताले ? कुन कुन सरकारले ऋण ल्याएर नेपाली जनतालाई ऋण बोकाएको हो ?ती मन्त्रीहरु कुन कुन हुन् ? र सबैको घर खेत कति जोड्यो त्यो सबै हिसाब किताब हुनुपर्छ ?
ऋण भुकम्पपछिको पुर्ननिर्माणमा प्रयोग गर्ने भनेर आउनुपर्छ, स्वास्थ्यको लागि प्रयोग गर्ने, खानेपानीको लागि भनेर अनि हामीले स्वीकृति दिन मिल्छ । त्यत्तितै ऋण लिने भनेर हुन्छ ? सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५/७६ का लागि विनियोजित बजेटमा १ सय ७२ अर्ब ऋण उठाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
बैठक आजै साढे २ बजे बस्ने गरि स्थगित गरिएको छ ।
Previousअष्ट्रेलियामा पढ्न आउनको लागि युनिभर्सिटी छान्नुअघि ध्यान दिनुहोस् यी कुराहरु
Nextअमेरिका भन्दा आमा ठूलो लाग्यो, अमेरिका छोड्न श्रीमती पनि राजी भइन् : यमन श्रेष्ठ
देउवा नै बने संसदीय दलकाे नेता !
२१ फाल्गुन २०७४, सोमबार ०८:१६
‘बिजुली उत्पादन बढेपछि नेपालले अमेरिकालार्इ उछिन्छ’
६ श्रावण २०७४, शुक्रबार १४:०६
काठमाडौंमा डेढ सय भारतीय कमाण्डो सेना
१३ भाद्र २०७५, बुधबार ०१:३२
संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीको विवाद विहीवार मात्र टुंगिने
२३ चैत्र २०७२, मंगलवार ०१:०७